सिम्ता गाउँपालिकाकाे कर्मचारी भर्नामा बदमासी, रातारात लिष्टमा नाम नै हेरफेर ! — Himali Sanchar
सुर्खेत : सिम्ता गाउँपालिकाले गत साउनमा करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्वन्धी सूचना प्रकाशित गर्याे । गाउँपालिकाद्वारा साउनको १४ गते प्रथम पटक प्रकाशित गरिएको पदपुर्ति सम्बन्धीको सूचनामा १२ कर्मचारीहरुको आवश्यकता रहेको थियो ।
आवश्यक कर्मचारीमा गाउँपालिकाले सामुदायिक स्वास्थ्य इकार्इ केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीतर्फ बाह्रखर्क र बैसपानीका लागि सहायक चौथो तह अन्तर्गत अनमी (दुई), बाह्रखर्क, दुरपाला र बैसपानीका लागि सहायक चौथो तह अन्तर्गत अहेव (तीन), राकम स्वास्थ्य चौकीका लागि सहायक चौथो तह अन्तर्गत ल्याव असिस्टेन्ट (एक), बाह्रखर्क, दुरपाला र बैसपानीका लागि कार्यालय सहयोगी (तीन) खोजिएको थियो ।
यसैगरी, बर्थिङ सेन्टरतर्फ आग्रीगाउँ स्वास्थ्य चौकीका लागि सहायक चौथो तह अन्तर्गत अनमी (एक) खोजिएको थियो । एक गाउँ एक जेटीए कार्यक्रमतर्फ सिम्ता गाउँपालिकाका लागि सहायक चौथो तह अन्तर्गत कृषि प्राविधिक (एक) र सहायक चौथो तह अन्तर्गत पशु प्राविधिक (एक) आवश्यक रहेको सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो ।
सूचनामा जानकारी दिए अनुसार उक्त पदहरुका लागि दरखास्त दिने अन्तिम मिति साउन २८ गते सम्मका लागि जनाइयो । र, परीक्षा हुने समय तालिका दरखास्त दिने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट जानकारी दिइने सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो ।
गाउँपालिकाले करार पदपुर्तिका लागि आएका आवेदनहरुलाई समयमा नै परीक्षा लिन सकेन । कार्तिक १४ गते बसेको परीक्षा छनौट समितिको निर्णय अनुसार १६ गते सूचना प्रकाशित गर्दै सिम्ता गाउँपालिकाको कार्यालयले ७७ जना आवेदकहरु समावेश भएको सर्ट लिष्ट प्रकाशन गर्याे । सर्ट लिष्टमा समावेश भएका आवेदकहरुका लागि कार्तिक २९ गते परीक्षा मिति तोकियो ।
सर्ट लिष्ट प्रकाशन गरेको दुई दिन पछि १८ गते अर्को सूचना जारी गर्दै गाउँपालिकाले भूलवश सर्ट लिष्टमा अनमी पदमा कविता शाहीको नाम समावेश भएकोले हटाइएको जानकारी दियो । फेरी अर्को सर्ट लिष्ट प्रकाशित गरियो जसमा अनमी पदमा कविता शाहीको नाम हटाइएको थियो र कृषि प्राविधिकमा रक्षा बस्नेतको नाम थपिएर आयो ।
सर्ट लिष्ट प्रकाशन गर्दा नाम थपेर आउँदा गाउँपालिका शंकाको घेरामा तानिएको छ । गाउँपालिकाले सर्ट लिष्टमा नाम थपेर प्रकाशित गर्दा सिम्ता गाउँपालिका वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह आक्रोशित भएपछि गाउँपालिकाको कर्मचारी पदपुर्ति विवाद बाहिरी सतहमा आएको हो । पदपुर्ति विवादमा तानिएपछि कार्तिक २९ गते तोकिएको परीक्षा २७ गते सूचना टाँस गरि परीक्षा स्थगित गरी मंसीर १३ र १४ गतेका लागि अन्तर्वार्ताको मिति तोकियो ।
अन्तर्वार्ता हुन नपाउँदै मंसीर १३ गते वडा अध्यक्ष सिंहले सिम्ता गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरे । ‘पुनः प्रकाशन भएको सर्ट लिष्टमा नाम थपिएर आउँदा असन्तुष्टी जनाएको हुँ’, सिंहले भने । उनले थपे, ‘एक पटक सर्टलिष्ट प्रकाशित भएपछि पुनः प्रकाशित गर्दा नाम कसरी परिवर्तन भयो ? अन्तर्वार्ता मितिलाई पटक-पटक सारियो । फेरी नामै थपिएर आउदा तालाबन्दी गरेको हुँ ।
उनले लगाएको ताला प्रहरीले केही समय पछि खोलेको थियो । गाउँपालिकाको दैनिक कामकाज सुचारु भएतापनि कर्मचारी पदपुर्तिका लागि लिइने भनिएको परीक्षा भने सञ्चालन भएन । सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि चार महिना बित्दा पनि गाउँपालिकाले पदपुर्तिका लागि सर्ट लिष्टमा परेकाहरुको अहिलेसम्म परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।
गाउँपालिकाले यतिसम्म लापरवाही गरेको छ कि सर्ट लिष्टमा अनमी पदमा कविता शाही दोहोरो पदमा देखिएकी छिन् । उनको नाम अनमी तर्फ पनि छ तर, शाही जेटीए हुन् । खास विवाद निम्त्याएको रक्षा बस्नेतको नाम हो । उनको सर्ट लिष्ट जारी गर्दा नाम थिएन । फेरी अर्को सर्ट लिष्ट जारी गर्दा एकाएक उनको नाम थपियो ।
एकपटक सर्टलिष्ट जारी भईसकेपछि पुनः नाम थपिनु आश्चार्यचकित परेको स्थानीयले बताए । वडा अध्यक्ष सिंहले पहिलो सर्ट लिष्ट अनुरुप नै परीक्षा लिनुपर्ने बताए । ‘कानूनसम्मत हुँदैन भने गाउँपालिकाले सरासर गलत गरेको छ’, उनले थपे ।
यता, गाउँपालिका अध्यक्ष कविन्द्र केसीले ‘योग्यता हुँदाहुँदै पनि रक्षा बस्नेतको नाम भुलवश् छुटेकोले सर्ट लिष्ट पुनः प्रकाशन गरि थपिएको’ बताए । उनले यसो भनेपनि सर्टलिष्ट जारी गरिसकेपछि पुनः नाम थपिनु कतिसम्म कानून सम्मत होला ? कुरा यहीँ नेर विचारणीय छ ।
यस्तै सिंहले भने कर्मचारी पदपुर्ति सम्वन्धमा आफ्नो असहमती रहेको बताउँदै आएका छन् । सर्ट लिष्ट जारी गर्नु अघि आवेदकको कागजात अध्ययन नगरी अन्धाधुन्ध रूपमा सर्टलिष्ट जारी गरेको उनको आरोप छ ।